Oduu Ammee:Obbo Baqqalaa Garbaa fedhii kiyya malee bakka mootummaan ofii barbaadetti hin waldhaanamu jechuun, – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOduu Ammee:Obbo Baqqalaa Garbaa fedhii kiyya malee bakka mootummaan ofii barbaadetti hin waldhaanamu jechuun,
Obbo Baqqalaa Garbaa fedhii kiyya malee bakka mootummaan ofii barbaadetti hin waldhaanamu jechuun, Ambulaansii keessaa bu’uu waan didaniif Poolisiin gara mana hidhaa Qaallittiitti isaan deebisuuf dirqamuu OMN odeeffate.
Har’a waaree booda, bulchiinsi mana hidhaa Qaallittii gara mana yaalaa si geessina jechuun, Dookteerota dhuunfaa fi Obbo Baqqalaa Garbaa Ambulaansiin fuudhanii erga ba’anii booda, mana yaalaa dhuunfaa hidhamtootni siyaasaa kun itti waldhaanamuuf mana murtii gaafatanii, hayyama argatanirraa humnaan maqfamuun gara Hospitaala Humna Waraanaatti (Xoor Haayilooch jedhamuun beekamutti) geeffamuu isaanii gabaasuun keenya ni yaadatama.
Intala Obbo Baqqalaa Garbaa, Boontuu Baqqalaan OMN waliin gaafiif deebii taasisteen, Obbo Baqqalaa Garbaa mana yaalaa akka geeffamaniif poolisootaan dabaalamanii fudhatamanii ba’anis, daandiirratti maqfamuun mana yaalaa mootummaan ofiif fedhu kan hidhamtoonni siyaasaa itti yaalamuuf amantaa irra hin qabnetti, humnaan geeffamanii akka turan ibsitee turte.
Obbo Baqqalaa Garbaa lagannaa nyaataa guyyaa 20ffaaf gegegessaa jiraniin hedduu kan dadhaban ta’anis, mana yaalaa mootummaatti yaalamuu hin fedhu jechuun, Ambulaansii keessaa bu’uu diduu isaanii maddi keenya garasii himee jira.
Yeroo ammaa kanatti Obbo Baqqalaan, sababa “mana yaalaa mootumamarraa amantaa hin qabu, mana yaalaa dhuunfaa kan akka itti yaalamnuuf manni murtii nuuf hayyametti malee kan mootummaan ofiif ijaarratetti hin waldhaanamu” jechuun diddaa agarsiisaniif, poolisiin utuu Obbo Baqqalaa Garbaan waldhaansa fayyaa hin argatin, gara mana hidhaa Qaallittiitti isaan deebisuusaa maddi keenya himee jira.
Obbo Baqqalaa Garbaa hedduu laaffachuufi haalli isaan keessa jiran, waldhaansa atattamaa kan isaan barbaachisu ta’us, “Mootummaa haqa nu dhowwachuun mana hidhaa keessatti nu dararaa jirurraa lubbuu keenyaaf amantaa hin qabnu” jechuun, mana yaalaa dhuunfaa manni murtii isaaniif hayyametti yoo ta’e malee, waldhaanamuu akka hin feene himuu isaaniitiif jecha, poilisoonni mootummaa utuu Obbo Baqqalaan dhukkubsatanii, waldhaansa tokko malee gara mana hidhaatti isaan deebisuun balbala Qaallittii akkuma kaleessaa itti cufaniiru.
Obbo Baqqalaa Garbaa dabalatee, Jawaar Mohammadiifi Obbo Haamzaa Booranaa haala baayyee nama yaaddeessuufi sodaachisu keessa jiraachuu isaanii OMN odeeffatee jira.
Oduu belbeltuu obsaan abdiisaa hikkamee jira baga rabbiin harka nyaaphaatii sibaase jennaan